WARSAXAAFADEED AYEY SOO SAAREN QUBAJOOGA S/LAND EE W. AMERICA | Toggaherer's Weblog
Tan iyo marki lagu dhawaaqii Dawladnimada Soomaali Laand 1991kii, Qurba joogta Reer Soomaali Laand ee degan Waqooyiga Mareeykanka iyo Dunida kaleba, marnaba kama caajisin wax u qabadka dalkoodii hooyo maal iyo nafba si ay u taageeraan hamiga Jamuuriyadan curdinka ah ee Somaliland ku doonaysay in ay ku samaysato dowlad madaxbanaan oo iskeed isu maamusha .
Sharci ahaan waxay ahayd in doorasho la sameeya markii ay mudadii Madaxwayne Riyaale ay dhamaatay Bishii Abriil 14keedii 2008. Hase yeeshee ma dhicin, Maamulku uma sarekicin hirgalinta sharciyadii ku xidhnaa doorashada ee dhinaceeda ku xidhnaa. Dhinaca kalena islama dhinac taagin dhaqaalihii, gaadiidkii, iyo xoogagii kale ee looga baahnaa. Kuwaas oo dhamaantood ahayd kuwo sharcigu farayay. In kastoo aan sharcina ogolaankarin muddo korodhsi Madaxweeyne, markii ay taasu dhacday si loo horjoogsado xasilooni daro iyo jaahwareer ku yimaada dalka, waxaa dhacday in ay Asxaabta mucaaradka ahi, si ay taas uga hortagaan ogolaadeen in loo kordhiyo muddada Madaxweeyne Riyaale oo loogu daro hal sano oo kale, balse shuruud looga dhigay in doorashada la qabto Bisha Maarso 29keeda 2009. 302 maalmood baa ka soo wareegtay mudadii Madaxweeynaha loo korodhsiiyay. Marlabaad maamulkii si cadownimo ah buu ugu tuntay himilooyinkii iyo rajooyinkii, waxuu na cabudhiyay rabitaankii dadweenahii Soomaali Laand si ay u hantaan xuquuqdooda una haystaa xornimadooda, una helaan doorasho aan musuq maasaq la hayan oo is dabba joogta.
Iyadoo gacan saar laga helay Ururada Caalamiga ah, waxaa hirgashay si taariikhi ah diiwaan gelintii codaynta dadwaynaha Soomaali Laand, taas oo si tafatiran u dhamaatay oo dadkii codayn lahaa ay si farxad ku jirto ay u diyaar yihiin in ay doortaan Madaxweeyne oo ay tegi doonaan goobihii doorashada wakhtiga loo cayimo.
Inkastoo ay ka hadhay 44 casho wakhtigii doorashada loo qoondeeyay in dhacdo, waxaa muuqda in maamulku Riyaale iyo Xisbigiisa in aanay muujinayn wax qorshe ah iyo wax ka qabad ay ku hirgalinayaan rabitaanka bushada in doorasho dhacdo. Qurba Joogta Reer Soomaali Laand ee Waqooyiga Mareeykanka baa arrintaasu ku noqotay amakaag, isla markaana ku reebtay walaac iyo afkalaqaad in dawladii aanay ku talo jirin sidii wadanka doorasho uga dhici lahayd.
Waxaanu ugu baaqaynaa Madaxweeyne Riyaale, doowladiisa, iyo hayadaha Caalamiga ah ee caawinaya doorashada iyaga oo xushmaya rabitaanka dadwaynaha, ay qaadaan talaabooyinka hoos ku qoran:
1. In ay soo gabagabeeyaan saxeexaan na nidaamkii diiwaangelinta.
2. Soo gabagabeeyaan Ururada tartamaya.
3. In ay hubiyaan in la soo saaro wareegto Madaxweeyne oo qeexaysa dalka doorashada ka dhicidoonto Maarso 29keeda, 2009, taas oo Axdigu sheegayo.
4. In lahubiyo in ay doorashadu si sinaan iyo cadaaladd u dhacidoonto.
Waxaan uga digeeynaa dowladda iyo xisbigeeda in ay si buuxda ay masʼuul uga noqondoonto wax alaale iyo wixii keeni kara carqalad siyaasada, xasilooni daro, Ilaahay kama dhigee isku dhac dib u dhac ku keeni kara doorashada.
1. Jaaliyada Somaliland Ee Toronto iyo Nawaaxigeeda, Kanada
2. Jaaliyada Somaliland Ee Galbeedka Kanada
3. Jaaliyada Somaliland Ee Minnesota, Maraykanka
4. Jaaliyada Somaliland Ee Ohio, USA
5. Jaaliyada Somaliland Ee Gobolada Virginia/DC/Maryland, Maraykanka
6. Jaaliyada Somaliland Ee Galbeedka Maraykanka
7. Jaaliyada Somaliland Ee Waqooyiga iyo Bariga Maraykanka
8. Jaaliyada Somaliland Ee Gobolada Georgia/Tennessee, Maraykna
9. Jaaliyada Somaliland Ee Galbeedka Dhaxe Maraykanka
10. Jaaliyada Somaliland Ee Ottawa, Kanada.